Sakafo ara-tsakafo - Bezzia | Bezzia
sakafo io no dingana biolojika izay ampidirin'ireo zavamiaina ao anaty vatany ny sakafo sy ny rano. Noho io antony io dia olana ara-tsakafo daholo izy ireo amin'ny ankapobeny sy ny fiantraikan'izany amin'ny vatantsika. Ity dia olana iray tena lehibe satria misy fiantraikany amin'ny lanjan'ny vehivavy sy ny fahasalaman'ny vehivavy, faritra roa izay noho ny antony maro no tiantsika hikarakarana faran'izay betsaka.
sakafo Io no fizotran'ny sakafo misy fiantraikany sasany na hafa amin'ny vatantsika ary manana ny fampahalalana ilaina, afaka mihinana tsara isika ary manao io sakafo io mifanaraka amin'ny tadiavintsika rehefa mahazo lanja na very lanja.
Izany no antony anentananay anao hamaky ireto lahatsoratra ireto ary amin'izany dia afaka mihinana tsara sy mitafy endrika tsara tarehy miaraka amin'izay.
Inona no sakafo tsara indrindra hohanina amin'ny maraina
ny Tony Torres hace Ora 9 .
Io sakafo maraina io dia iray amin'ireo sakafo manan-danja indrindra amin'ny andro, zavatra izay tsy isalasalana fa efa fantatra….
Torohevitra momba ny fisafidianana ny mofo mahasalama indrindra
ny Tony Torres hace 1 herinandro .
Ny mofo, ankoatry ny sakafo ara-pahasalamana dia famenon-tsakafo amin'ny latabatra an-tapitrisany ...
Inona no tokony hampidirina anaty kalesy fiantsenana hihinana salama
Ny fahazavana momba ny sakafo tokony hampidirina ao anaty harona fiantsenana dia ilaina mba hihinana tena mahasalama. Satria rehefa mandeha ianao ...
Inona no atao hoe krononisialy?
ny Tony Torres hace Herinandro 2 .
Ny zavatra nohaninao sy ny fomba fihinananao azy dia misy fiatraikany amin'ny fihenan'ny lanja (na tsia). Fa misy singa hafa koa ...
Inona ny kombucha? Ny tombo-tsoa azo avy amin'ny fisotroana alefa
Na dia efa ela aza no nanjary fisotroana lamaody io, ny kombucha dia manana tantara an-jatony ...
Tombony lehibe azo amin'ny fihinanana akondro
ny Susana godoy hace Herinandro 3 .
Fantatsika rehetra fa ny voankazo dia tsy maintsy eo foana amin'ny sakafo sahaza ny sira. Noho izany, tsy misy toa an'i ...
Hevitra fisakafoanana maraina 3 hampitomboana ny hozatra
ny Tony Torres hace 1 volana .
Mba hampitomboana ny hozatra dia ilaina ny manambatra fanazaran-tena tsara amin'ny sakafo sahaza azy. Ny sakafo maraina dia ...
ny Susana godoy hace 1 volana .
Efa nampifangaroinao ao anaty sakafonao ve ny lafarinina? Ny marina dia mitady vahaolana vaovao foana isika ...
ny Tony Torres hace 2 volana .
Ny fananana fitetezana tsinay tsara dia ilaina mba hahasalama anao. Satria ny fanesorana ny fako amin'ny vatana dia ...
Vitamina B3: ny tombony azo, sakafo ary maro hafa
ny Susana godoy hace 2 volana .
Fantatrao fa misy vitamina maro izay iainantsika isan'andro. Izy rehetra dia samy manana ny tombony azo avy ...
Fantatsika hatrany ny maha-zava-dehibe ny fiainana salama, ny fihinanana sakafo tsara sy ny fahasalamana ary ny fikojakojana ...
Fantaro ny fiasan'ny vitamina rehetra
Torohevitra ho an'ireo vehivavy tsara vintana mila mihombo
Vokatry ny sakafo tsy voalanjalanja
Inona no hohanina ary inona no tsy hohanina raha manana diverticula aho?
Inona avy ireo sakafo transgenika?